IVexel ivula i-UltraCam Osprey 4.1-iGeofumadas
Ikhaya/cadastre/I-Vexel isungula i-UltraCam Osprey 4.1
cadastreGeospatial - GISGPS / IzixhoboZobunjineliezintshaEzahlukeneyo
I-UltraCam Osprey 4.1
Vexcel Ukulinganisa ibhengeza ukukhutshwa kwesizukulwana esilandelayo i-UltraCam Osprey 4.1, ikhamera yefomathi enkulu eguquguqukayo yemifanekiso eqokeleleneyo yemifanekiso eqokelelweyo ye-Photogrammetric grade nadir (PAN, RGB ne-NIR) kunye nemifanekiso eqingqiweyo (RGB). Uhlaziyo olwenziwa rhoqo kwikhrisimesi, ngaphandle kwengxolo, kunye nemifanekiso yedijithali echanekileyo yehlabathi ibalulekile kucwangciso lwesixeko sanamhlanje. Ukwenza kube lula ukusebenza ngokuqokelela kwenqwelomoya ngenqwelomoya ogqwesileyo kunye nomgangatho wejometri, i-UltraCam Osprey 4.1 ibeka umgangatho omtsha kwimephu zedolophu kunye nemodeli ye-3D yesixeko.
Ukukhokela isizukulwana sesine se-UltraCam sensor imaging sensorer, Inkqubo idibanisa iilensi ezintsha ezikhokelela kumzi mveliso, ii-sensor ze-CMOS ezizayo zenzelwa imveliso ngombane wesiko, kunye nombhobho womfanekiso okwinqanaba lehlabathi ukuhambisa imifanekiso enobulunga obungenakuthelekiswa nanto, ngokubhekisele kulungiso lweenkcukacha, ukucaca, kunye nobubanzi obuguqukayo. . Inkqubo ithatha ukuveliswa kwendiza ukuya kwinqanaba elitsha, iqokelela i-1.1 Gigapixels rhoqo kwimizuzwana eyi-0.7. Abathengi banokubhabha ngokukhawuleza, bagubungele indawo ngakumbi, kwaye babone ngakumbi iinkcukacha.
Indlela entsha yokuqokelelwa kwe-Adaptive Motion Comprehension (AMC) ilungele ukuqaqamba kwemifanekiso enganyanzelekanga ebanzi kwaye ifezekisa ukuguquguquka komlinganiso womgama weesampulu kwimifanekiso eqingqiweyo ukuvelisa imifanekiso yokuqaqamba okungathethekiyo nobukhali.
Ukufumaneka kwezorhwebo kwe-UltraCam Osprey 4.1 kucwangciselwe ukwenziwa kwangoko ngonyaka ka-2021.
Ukongeza kwifomathi entsha yokubala - i-UltraCam Osprey 4.1 yikhamera yesizukulwane sesine kuhlobo lwayo lokuqala - esi sizukulwana sitsha sazisa uhlengahlengiso loyilo olongezelelekileyo ukuze kukhululeke ukusetyenziswa ngokubanzi. Phakathi kwezinye izinto: intloko enekhamera enwebekileyo yandisa ukhetho lweenqwelo moya ukuya kwisikhululo esincinci seenqwelomoya kwaye umbono ocacileyo wokuvumela ufakelo lula ngaphandle kokuphakanyiswa kwekhamera. Abathengi ngoku banokufikelela ngokulula kwi-IMU kunye ne-UltraNav Hardware, ukutshintsha i-UltraNav okanye nayiphi na enye indlela yolawulo lwendiza kwisiza ngaphandle kwesidingo sokongezwa kwemali emva kokususwa kwe-IMU.
“Nge-UltraCam Osprey 4.1 ufumana iikhamera ezimbini kwindlu enye. Inkqubo ihlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zosetyenziso ukusuka kwimephu yesixeko ukuya kwimephu yesiqhelo yezicelo zenqwelomoya efanayo, utshilo u-Alexander Wiechert, iCEO yeVexcel Imaging. Kwangaxeshanye, sonyuse kakhulu unyawo lwe-nadir ukuya kuthi ga kwi-pixels ezingaphezu kwama-20.000 kulo lonke ibhendi yenqwelomoya ukuze senze uqokelelo lwenqwelomoya olusulungekileyo oluphunyezwa kuphela ziinkqubo ezinkulu zekhamera.
Ubungakanani bomfanekiso wePAN we-20.544 x 14.016 pixels (nadir)
14,176 x 10,592 iiphikseli ngombala wemibala (oblique)
I-sensorer yomfanekiso weCMOS
Ubuyiselo oluPhezulu lweMbuyekezo yeNtsusa
Isakhelo esi-1 kwimizuzwana eyi-0.7
Inkqubo ye-lensi ye-80mm ye-PAN.
Inkqubo ye-lensi yemibala eyi-120mm (iphethini yeRGB Bayer)
Geopois.com - yintoni na?
Kwaye ekugqibeleni, ziziphi iimangaliso zemvelo eziyilandelayo?